Firefox 85.0.1 inogadzirisa kusagadzikana uye inogadzirira kutaura zvakanaka kune SSB muFirefox 86 | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 85.0.1 inogadzirisa kusagadzikana uye inogadzirira kutaura zvakanaka kune SSB muFirefox 86
Munguva pfupi yapfuura fixes dzakaburitswa yeFirefox 85.0.1 uye Firefox ESR 78.7.1, ayo atovepo uye kusvika kugadzirisa kusagadzikana yakakosha iyo inogona kutungamira kune kodhi kuuraya pane iyo system kana ichivhura zvimwe zvemukati.
Dambudziko inokonzeresa bhavhu kufashukira muAngle library neiyo OpenGL ES yekumisikidza, iri kuvandudzwa nechirongwa cheChromium uye inoita senzvimbo yekududzira OpenGL ES inoshevedza OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL, uye Vulkan.
Nekuda kwekuverenga kusiri iko kwehukuru hweparamu kudzika kwemhando dzakatsindirwa, mamiriro anomuka kuti asvike nzvimbo iri kunze kwenzvimbo yakapihwa buffer. Tsanangudzo pamusoro penyaya iyi haisati yaziviswa.
Kana zviri zvimwe zvisiri zvekuchengetedza muFirefox 85.0.1, zvinotevera zvinotaurwa:
Kuwana nzira dzakasarudzika dzeNTFS, zvinokanganisa zvinogona kukonzera kukuvara kwenzvimbo, zvinorambidzwa.
Yakagadziriswa tsaona painosimbisa kumasosi uchishandisa SPNEGO (Yakareruka uye Yakachengetedzwa GSSAPI Kutaurirana Mechiniki) pane macOS zvishandiso zvine maCPU zvinoenderana neiyo nyowani ARM M1 machipisi.
Bvisa kudhinda imwe peji isina chinhu kumagumo yemamwe magwaro.
Yakagadziriswa tsaona painoshandisa Cache API.
Yakavandudza basa rekunze URL scheme vatongi pavanotanga Firefox kubva kuflatpak package.
Uyewo, unogona kucherechedzwa kuiswa kweFission mode ye1 / 4 yeFirefox's husiku inovaka pamwe nekumisikidzwa kweyakagadziridzwa multithreaded dhizaini yekuomesesa peji kusarudzika.
Kana Fission yashandiswa, mapeji kubva kumasosi akasiyana anogara achigoverwa mundangariro dzemaitiro akasiyana, mumwe nemumwe wavo anoshandisa yavo marara bhokisi.
Panguva imwecheteyo, kupatsanurwa kuita maitiro hakuitwe netabhu, asi nematunhu, ayo anotendera iwe kuti uenderere mberi nekuparadzanisa zvirimo zvekunze zvinyorwa uye iframes.
Fission modhi inogona kugoneswa nemaoko mune nezve: zvido # peji rekuyedza kana nekushandisa iyo inoshanduka "fission.autostart = ichokwadi" mune nezve: config.
Uyezve, isu hatifanirewo kukanganwa izvozvo Mozilla Kupedza Firefox 86 Desktop Tsigiro Yekuyedza SSB Maitiro, iyo yakaita kuti zvikwanisike kugadzira yakaparadzaniswa nzira yekusaiti kuvhura pasina browser interface zvinhu, iine rakaparadzana icon pabhara rebasa, semutemo wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 85.0.1 inogadzirisa kusagadzikana uye inogadzirira kutaura zvakanaka kune SSB muFirefox 86
ENCODYA: puzzle adventure vhidhiyo mutambo weLinux